ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဦးအောင်ကြည်တွေ့ဆုံမှုနဲ့ ရှေ့အလားလာများ။ ~ Htet Aung Kyaw
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဦးအောင်ကြည်တွေ့ဆုံမှုနဲ့ ရှေ့အလားလာများ။
5:42 AM Htet Aung Kyaw No comments
နော်ဝေး၀န်ကြီးနဲ့ ဒေါ်စုစုတွေဆုံမှုအကြောင်း TV2နော်ဝေးမှ ရုပ်သံ-မှတ်တန်း
Norway would like to have investments in oil and gas and hydropower from the Norwegian side.And the evolution continues, the Aung San Suu Kyi be presidentpalassets next occupant.
(နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို အောက်ဆုံးမှာ ထည့်ထားပါတယ်)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဝန်ကြီးဦးအောင်ကြည် စတုတ္ထအကြိမ်တွေ့ဆုံ
အစိုးရသစ်လက်ထက် စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် တွေ့ဆုံမှုအပြီး ရန်ကုန်မြို့စိမ်းလဲ့ကန်သာ နိုင်ငံတော်ဧည့်ဂေဟာ အတွင်းမှ ထွက်လာသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်တို့ကို
အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် မွန်းလွဲပိုင်းက တွေ့မြင်ရစဉ်။
၀န်ကြီး ဦးအောင်ကြည် "ကျနော်အနေနဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကို ဦးစွာဖတ်ပြပါမယ်”
“ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရအဖွဲ့၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် စိမ်းလဲကန်သာ အစိုးရ ဧည့်ဂေဟာတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်အား ၂၀၁၁ ခုနှစ်ေ အာက်တိုဘာလ ၃၀ ရက် မွန်းလွဲ ၁၃း၀၀ နာရီမှ ၁၃း၅၅ နာရီအထိ လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် ယခင်ဆွေးနွေးခဲ့မှုများအပေါ် နိုင်ငံတော်က လိုအပ်သည်များ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် အခြေအနေ၊ တိုင်းပြည်စီးပွားရေး ဖွံဖြိုးတိုးတက် လာစေရန်အတွက် လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ခွင့်၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ခွင့်ရရှိရေးနှင့် လွတ်လပ်စွာ ငွေကြေးလည်ပတ်သုံးစွဲခွင့် ရရှိရေးတို့၏ အရေးကြီးမှုနှင့် ပတ်သတ်၍ အမြင်ခြင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
ထို့အပြင် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန် နိုင်ငံတော်က ဆောင်ရွက်ပေးနေမှုများ၊ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှု အခြေအနေများနှင့် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးသင့်သူများ ကိစ္စကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများကို ဆက်လက်ပြုလုပ်သွားရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။”
ဖြေ- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ။ ။ ကျမတို့ ဒီကိစ္စတွေ အားလုံးကို ဆွေးနွေးပါတယ်။ အမြဲတမ်းလဲ ကျမတို့ တွေ့တိုင်းလဲ ဒီကိစ္စတွေကို ဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒါကျမတို့ ပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့ ကိစ္စတွေ မို့လို့ပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဦးအောင်ကြည်တို့ ဆွေးနွေးပွဲအပီး ထုတ်ပြန်တဲ့ ကြေငြာချက်
NLD မှတ်ပုံတင်ရေး မတင်ရေး ရက်ပိုင်းအတွင်း ကြေညာဖွယ်ရှိ
ခင်ဦးသာ on October 31, 2011 6:41 pm, ဧရာဝတီမဂဇင်း။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) နှင့် မဟာမိတ်ပါတီများက နိုင်ငံရေးပါတီများအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ရေး၊ မတင်ရေး နှင့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ရေး၊ မ၀င်ရေး ကိစ္စများကို နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့တွင် ကြေညာသွားဖွယ်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ယနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းက ရန်ကုန်မြို့ ဗေဒါသင်တန်းကျောင်းတွင် တွေ့ရသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ)
ထိုနေ့တွင် NLD ပါတီ၏ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့အပြင် အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးအဖွဲ့များနှင့်စုစည်းထားသည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီ (CRPP) ကလည်း ထိုကိစ္စများကို အပြီးသတ် ဆွေးနွေးကြမည်ဟု CRPP အတွင်းရေးမှူး ဦးအေးသာအောင်က ပြောသည်။
“CRPP အစည်းအဝေးမှာ ပါတီမှတ်ပုံရေး ကိစ္စတွေ အားလုံး ဆွေးနွေးသုံးသပ်ကြမယ်၊ ကြေညာချက်ထုတ်မယ်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်တခုပေးမယ်၊ CRPP ဆုံးဖြတ်ချက်ကို NLD ကလည်းပဲ သဘောတူပြီးပါပြီ၊ NLD စီအီးစီ အစည်းအဝေးလည်း အဲဒီနေ့မှာ လုပ်မယ်လို့ ကြားသိရပါတယ်” ဟု ဦးအေးသာအောင်က ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
“ဖြစ်ပေါ် တိုးတက်မှုတွေကို အခြေခံပြီးတော့ ကျနော်တို့ အနေနဲ့ အားလုံးနဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိပါတယ်၊ ရပ်နေလို့တော့ မရဘူးပေါ့” ဟု ဦးအေးသာအောင်က ဆက်ပြောသည်။
နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေကြမ်း ထွက်ပေါ်ပြီးနောက် NLD ပါတီမှတ်ပုံတင်ရေးကိစ္စအပေါ် အမြင် အမျိုးမျိုးထွက်ပေါ်နေသည်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ အားလုံး လွတ်မြောက်လာပြီး၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ဆောင်ရွက်ပြီးမှသာ မှတ်ပုံတင်၍ ရွေးကောက်ပွဲဝင်သင့်ကြောင်း အတိုက်အခံ တချို့က ယူဆကြသည်။
ပြည်ပရောက် ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားနေသူ မခင်ဥမ္မာက NLDသည် ပြည်သူ တရပ်လုံးအား ကိုယ်စားပြုထားသည့် ဒီမိုကရေစီအရေး တိုက်ပွဲဝင်နေသော ပါတီတခုဖြစ်၍ သေချာ စဉ်းစား ဆုံးဖြတ်သင့်ကြောင်း ပြောသည်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို NLD က သပိတ်မှောက်ခဲ့သည့် အတွက်သာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်တို့ တွေ့ဆုံမှု၊ ၀န်ကြီး ဦးအောင်ကြည်နှင့် တွေ့ဆုံမှုတို့ ဖြစ်ပေါ်လာရကြောင်း၊ အကယ်၍ ပါတီ မှတ်ပုံတင်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည် ဆိုပါက တခြားပါတီများကဲ့သို့ ရပ်တည် ဆောင်ရွက်ရတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် မခင်ဥမ္မာက သုံးသပ်လိုက်သည်။
“၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကသာ ပါဝင်ခဲ့ရင် အခုလိုမျိုး သမ္မတက သီးသန့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုတွေ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ပြောစရာရှိရင် လွှတ်တော်ထဲကပြော လို့ပဲ ပြောတော့မှာပေါ့၊ လွှတ်တော်ထဲမှာလည်းပဲ ကြံ့ဖွံ့နဲ့စစ်တပ်က လွှမ်းမိုးနေတော့ ပြောဆို တင်ပြသမျှ ပယ်ချခံနေရဦးမှာပဲ” ဟု မခင်ဥမ္မာက ဆိုသည်။
မခင်ဥမ္မာက အစိုးရ၏ ခြေလှမ်းများကို သံသယ ရှိသော်လည်း မကြာသေးမီက နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေ၏ အချက်တချို့အား ပြင်ဆင်လိုက်ခြင်းကို ကြိုဆိုလိုက်သည်။
ပြင်ဆင်ထားသည့် ဥပဒေကြမ်းအား လွှတ်တော် နှစ်ရပ်လုံးက အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်နေ့တွင် အတည်ပြုခဲ့ကြပြီး သမ္မတ လက်မှတ်ရေးထိုးရန်သာ လိုတော့သည်။
ထိုသို့ ပြင်ဆင်ချက်များတွင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအား ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရမည် ဟူသော စကားရပ်အစား လေးစားလိုက်နာရမည်ဟု ပြောင်းလဲ ရေးသားချက် ပါဝင်သည်။ အကျဉ်းကျခံဖူးသူများ ပါတီ တည်ထောင်ခွင့်၊ အကျဉ်းကျနေသူများ ပါတီဝင်အဖြစ် သတ်မှတ်ပိုင်ခွင့် စသည့် အချက်များလည်း ပါဝင်သည်။
NLD ပါတီသည် မှတ်ပုံတင်ပါက ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ၌ အနည်းဆုံး ကိုယ်စားလှယ် ၃ နေရာ ၀င်ရောက် အရွေးခံရမည်ဖြစ်သည်။ လစ်လပ်နေသော မဲဆန္ဒနယ် ၅၀ ၀န်းကျင် အတွက် ပြုလုပ်မည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည့် အချိန်ကို အစိုးရက ကြေညာခြင်း မရှိသေးပေ။
“NLD ပါတီနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲကို မ၀င်ဘဲ ၂၀၁၅ (ရွေးကောက်ပွဲ) မှာပဲ တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ဝင်စေ ချင်နေကြတာ ရှိသလို ရသလောက်ကို ၀င်ပြိုင်ပြီးတော့ လွှတ်တော်ထဲက ပြောဆိုစေချင်သူတွေလည်း ကြားနေရပါတယ်၊ ကျနော်ကတော့ ပြည်သူအားလုံး အကျိုးရှိမယ့် ကိစ္စဆိုရင် အားလုံးက ပူးပေါင်းသင့်တယ် ထင်တယ်” ဟု ဦးအေးသာအောင်က ပြောသည်။
ဤအတောအတွင်း ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုဌေးကြွယ်၊ ကိုကိုကြီး စသည့် ထင်ရှားသူများ အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာတော့မည်ဟု ကြားသိရကြောင်း ဦးအေးသာအောင်က ပြောသည်။ ထိုသတင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး အာဏာပိုင်တို့က အတည်ပြု ပြောဆိုခြင်း မရှိသေးပေ။
NLD ပါတီ မှတ်ပုံတင်ပြီး ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရေးကို အပြည့်အ၀ ထောက်ခံသူများထဲတွင် NDF ပါတီ ခေါ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အင်အားစုလည်း ပါဝင်သည်။
“ပြည်သူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို လွှတ်တော်ထဲက ပြောချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ပါတီထောင်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲဝင်တာ အကောင်းဆုံးပါ၊ လွှတ်တော်နိုင်ငံရေးကသာ အာဏာရှင်အစိုးရကို ပယ်ဖျက်နိုင်မယ်လို့ ယူဆတယ်” ဟု NDF ပါတီ ခေါင်းဆောင် ဦးခင်မောင်ဆွေက ဆိုသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်နိုင်တယ်လို့ ဦးဥာဏ်ဝင်း ပြောဆို
ပြည်သူ့လွှတ်တော်က ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပဒေတချို့ကို ပြင်ဆင်လိုက်တာကြောင့် NLD ပါတီ အနေနဲ့ ပါတီမှတ်ပုံတင်ဖို့ အလားအလာတွေ ရှိနေပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့လည်း လာမယ့် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲကို ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ဖွယ် ရှိတယ်လို့ NLD ပါတီ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောပါတယ်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင်အများစုက ပါတီ မှတ်ပုံမတင်ရေး သဘောတူခဲ့ကြပြီးနောက် ရွေးကောက်ပွဲမဝင်ရေး ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မတ်လ ၂၉ ရက်တွင် ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦး (ယာ) နှင့် ပါတီ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးဉာဏ်ဝင်း (ဝဲ) တို့က ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဌာနချုပ်ရုံးတွင် သတင်းထောက်များကို ရှင်းလင်း ပြောကြားနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ (Photo: AFP)
NLD ပါတီက ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပါ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေထဲက အချက်တချို့ကို လွှတ်တော်ကနေ ပြင်ဆင်ချက် ပေးလိုက်ပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် NLD ပါတီအနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှာ မှတ်ပုံတင်ဖို့ အလားအလာတွေ ရှိနေတာလို့ သိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဆောင်ရွက်မှုအတွက် NLD ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေးမှာ ဆုံးဖြတ်ဖို့ ရှိတယ်လို့ ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပါတီတွင်း သဘောထား ကွဲပြားမှုတွေ ပေါ်ပေါက်နိုင်ပါသလားလို့ မေးမြန်းတဲ့အခါ ဦးဥာဏ်ဝင်းက - အမှန်ပြောရရင် ပါတီတွင်းမှာ သဘောထားကွဲပြားမှု ရှိကြောင်း၊ ဒါပေမယ့် ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှာတော့ အားလုံး အညီအညွတ်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုပါတယ်။
ဦးဥာဏ်ဝင်းက မိမိအနေနဲ့လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်တာကို မြင်လိုပါတယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း ရိုက်တာ သတင်းဌာနက ဖော်ပြပါတယ်။
Face book မှ ထင်မြင်ချက်တခု...
စိတ်ဝင်စားစရာဘဲ့။ နိုင်ငံရေးဆိုတာ ပြောင်းချင်ရင် တချက်တည်းဆိုလား..။ ...နိုင်ငံရေးဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာကိုလုပ်ခြင်းလိုလဲဆိုကြပါတယ်။ ဒီနေ့ ဒေါ်စုနဲ့ ဦးအောင်ကြည် ထပ်တွေ့တာတွေ။ မနေ့က အာဆီယံ-၀န်ကြီးနဲ့တွေ့တာတွေ။ ရှေ့တပါတ်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးထပ်လာ မှာတွေဟာ ...နောက်ပြန်ဆုတ်ပြေးလို့မရနိုင်တော့တဲ့ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းတခုဆီ တကယ်ဦးတည်နေပီလား...? မင်းကိုနိုင်။ ခွန်ထွန်းဦးနဲ့ ဂန်ဘီရတို့ကို တကယ်လွတ်ပေးတော့မလား။ နယ်စပ်ကစစ်ပွဲတွေကိုကော တကယ်ရပ်တန့်နိုင်တော့မလား....? ဒီမေးခွန်းတွေကတော့ ကျန်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
NLD မှတ်ပုံတင်နိုင်ဖွယ်ကိစ္စ တုံ့ပြန်ချက်များ
NLD ပါတီ ပြန်လည် မှတ်ပုံတင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် နိုင်ငံရေးအရ ပိုပြီး လုပ်ဆောင်လာနိုင် လိမ့်မယ်လို့ ယူဆနေကြသလို တဘက်ကလည်း ဒီအချိန်မှာ ပြန်ပြီး မှတ်ပုံတင်လိုက်ရင် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်က ပိုပြီးများ ဝေးကွာသွားလေမလား ဆိုပြီး စိုးရိမ်မှုတချို့ ရှိနေကြပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ လွှတ်တော်က ပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ ပါတီမှတ်ပုံတင် ဥပဒေ ထွက်လာရင် ပါတီ မှတ်ပုံတင်မယ် မတင်ဘူးဆိုတာကို ယတိပြတ် ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုပြီး အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်နေ့က ပြောဆိုလိုက်တာပါ။ ဒီအပေါ်မှာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ သဘောထား အမြင်က ဘယ်လိုရှိသလဲ ဆိုတာကိုတော့ မသိင်္ဂီထိုက်က ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီရဲ့ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပါတီမှတ်ပုံတင်ရေး မတင်ရေးက အသစ်ပေါ်ထွက်လာမယ့် ပါတီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေပေါ်မှာ မူတည်တယ်လို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်နဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ တွေ့ဆုံအပြီးမှာ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီ (CRPP) ကတော့ NLD အနေနဲ့ နိုင်ငံရေး ပါတီအဖြစ် တရားဝင် ပြန်ပြီး မှတ်ပုံတင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကို ပိုပြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လုပ်ဆောင်လာနိုင် လိမ့်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အစိုးရ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကနေ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်လိုမျိုး၊ ပါတီ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ရေးလို ကိစ္စမျိုးတွေ ပြောဆို ဆွေးနွေးမှုတွေက မှန်ကန်တဲ့ နိုင်ငံရေး အလှည့်အပြောင်းတစ်ခု ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့လည်း ယူဆတဲ့အကြောင်း CRPP ရဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဦးအေးသာအောင်က ပြောပါတယ်။
“မှတ်ပုံတင်ခြင်းအားဖြင့် ပါတီရဲ့လုပ်ငန်းတွေ၊ စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းတွေ ဒီထက်ပိုပြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လုပ်နိုင်မယ်လို့တော့ NLD ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေက ပြောတာတွေလည်း ကြားဖူးပါတယ်။ ဒီအပေါ်မှာတော့ ကျနော်တို့ကလည်း ဒီလို အပေးအယူလုပ်တယ်။ တဘက်နဲ့တဘက် အပြန်အလှန် ယုံကြည်မှုတွေ ရှိလာတယ်ဆိုရင် ပါတီမှတ်ပုံတင်တာကတော့ ကောင်းမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါကို ကျနော်တို့ အခုလာမယ့် လဆန်းမှာ ပြုလုပ်မယ့် အစည်းအဝေးမှာ ဒါတွေကိုလည်းပဲ ဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိပါတယ်။ NLD က အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မှတ်ပုံတင်တာတွေ လုပ်လာမယ်၊ တရားဝင်ပါတီအဖြစ် ရပ်တည်လာမယ် ဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ ပြန်လည် သုံးသပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်း CRPP မှာလည်း လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။”
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အနေနဲ့ တရားဝင်ပါတီအဖြစ် ပြန်လည် မှတ်ပုံတင်ဖို့အတွက် ပါတီခေါင်းဆောင်ပိုင်းက ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင် ပြည်ပအခြေစိုက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် လွတ်မြောက်နယ်မြေ (NLD-LA) အနေနဲ့ ကန့်ကွက်စရာ မရှိဘူးလို့ NLD-LA ရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ စစ်ကိုင်းတိုင်း ယင်းမာပင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ် ဦးဘိုသောင်းက ပြောပါတယ်။
“အဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုကနေ ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်တာကို ကျနော်တို့ကတော့ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှာ ဖြစ်တယ်လေ။ ကျနော်တို့မြင်တာကတော့ နိုင်ငံရေးပါတီရယ်လို့ဖြစ်လာရင်တော့ နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းတွေ ဆောင်ရွက်ဖို့၊ နိုင်ငံရေးအာဏာ ရယူဖို့၊ နိုင်ငံရေးအာဏာ ရယူမှ ကိုယ်လိုချင်တဲ့လူထုအတွက် ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကို ကျနော်တို့က ဆောင်ကြဉ်းနိုင်မှာ ဖြစ်တာကိုး။ အထဲက ခေါင်းဆောင်မှုဖြစ်တဲ့ ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်အဖွဲ့ ရှိတယ်၊ ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင် ကော်မတီဝင်တွေ ရှိတယ်။ မြို့နယ်အသီးသီးက ခေါင်းဆောင်တွေ ရှိတယ်။ အဲဒီလို အားလုံးရဲ့ သဘောတူဆန္ဒနဲ့အညီ ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်ကြလိမ့်မယ်လို့ ကျနော်တို့ အလေးအနက် ယုံကြည်တဲ့အတွက် တရားဝင် နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတယ်မယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စကိုတော့ ကျနော်တို့အနေနဲ့ ကန့်ကွက်စရာမရှိဘူးလို့ ကျနော် ပြောချင်ပါတယ်။
“အဲဒီတော့ ကျနော်တို့က NLD လွတ်မြောက်နယ်မြေသည် ကျနော်တို့ ရှိနေခြင်းက အကျိုးရှိမလား၊ အကျိုးယုတ်စေနိုင်မလား။ အကျိုးယုတ်စေနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့က အားလုံးရဲ့ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ NLD-LA ရှိသင့်မသင့်၊ ဆက်ပြီး ဆောင်ရွက်သင့်မသင့် ကျနော်တို့ ၀ိုင်းဝန်းဆုံးဖြတ်သွားကြရမှာ ဖြစ်တယ်လေ။ သို့သော်လည်း ကျနော်တို့ကတော့ NLD-LA က ယခင်ကလည်း မိခင် NLD ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ ကိစ္စပေါ့။ ဥပမာ - ဒီဘက်မှာ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ ကျနော်တို့က နီးနီးကပ်ကပ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တယ်။ ကျနော်တို့နဲ့ သူတို့ကြားမှာ နားလည်မှုတွေ တည်ဆောက်နိုင်တယ်။ အလုပ်တွေ အတူတူလုပ်နိုင်တယ်။
ဒီဟာတွေအတွက်တော့ ကျနော်တို့က NLD-LA က ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့ ဆက်ရှိနေဦးမှာပဲ။”
NLD အနေနဲ့ ပါတီ မှတ်ပုံတင်ရေး မတင်ရေး ဆုံးဖြတ်တာမှာ လက်ရှိ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားအရေး၊ တိုင်းရင်းသားအရေးနဲ့ စစ်မှန်တဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး ကိစ္စတွေကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားဖို့တော့ လိုတယ်လို့ ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရက်တစ် တပ်ပေါင်းစု (FDB) ရဲ့ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာ နိုင်အောင်က ပြောဆိုပါတယ်။
“ကျနော်တို့အားလုံး တိုင်းပြည်ကို ပြန်လည်ကောင်းအောင် လုပ်စေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အခြေခံကောင်းတဲ့ အခြေအနေတစ်ရပ် ရှိဖို့လိုပါတယ်။ အဲဒါက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ ပြန်လွှတ်ရမယ်။ နောက်ပြီးတော့မှ ရန်သူတွေရဲ့အပြုအမူတွေ ရပ်ဆိုင်းတဲ့အနေနဲ့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးလုပ်ရမယ်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲဆိုတာ ပေါ်ရမယ်။ အဲဒါဆိုလိုရရှိရင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ရန်ရှာစရာမလိုဘဲနဲ့ အားလုံးကနေပြီးတော့ သွားလို့ရတဲ့ အနေအထားမျိုးပေါ့။
အဲဒီလိုဟာမျိုးကို အာမခံချက် အားလုံးကိုပေးတယ်ဆိုရင် အတုံ့အပြန် အနေနဲ့ ပြန်လည်တောင်းဆိုလာနိုင်တာက… ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဗျာ လောလောဆယ်တော့ ပါတီ မှတ်ပုံတင်ထားလိုက်ပါ။ ကျနော်တို့အားလုံး ကျေနပ်လို့ရအောင် ရွေးကောက်ပွဲလေးတော့ ၀င်ထားလိုက်ပါ။ သို့သော်လည်း ကျနော်တို့ နိုင်ငံရေးကို အပြင်မှာ ဆွေးနွေးပါ့မယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တိုင်းရင်းသားတွေလည်း ပါသေးတာမဟုတ်ဘူး…ဆိုတဲ့ဟာမျိုး ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်ဆိုတဲ့ သူတို့ပြောပြောနေတဲ့ သူမနာကိုယ်မနာပေါ့ အားလုံးနိုင်တဲ့ အခြေအနေမှာပေါ့။ အဲဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ အဲဒီအခြေအနေတွေ ဘာမှအာမခံချက် မရှိသေးဘဲနဲ့ ငါလိုချင်တဲ့ဥစ္စာကို မင်းတို့အတင်းလုပ်ဆိုရင်တော့ ဒါက တဖက်သက်အနိုင်ကျင့်တာများ ဖြစ်မလားလို့ ကျနော်တို့က အဲဒီလိုမျိုးဖြစ်မိတာပါ။”
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေဟာ တရားမျှတမှု မရှိတဲ့အတွက် ပါတီကို မှတ်ပုံတင်ဖို့ စဉ်းတောင် မစဉ်းစားဘူးဆိုပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ယတိပြတ် ပြောဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လို့ နေပြည်တော်မှာကျင်းပနေတဲ့ လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွေကနေ နိုင်ငံရေးပါတီ မှတ်ပုံတင်ဥပဒေ ပြင်ဆင်ချက်ကို အတည်ပြုလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာ NLD ပါတီက မှတ်ပုံတင်ရေး မတင်ရေး စဉ်းစားချက် ထွက်ပေါ်လာတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ပါတီမှတ်ပုံတင်ရေး ဥပဒေပြင်ဆင်ချက် မူကြမ်းကလည်း သမ္မတက လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးရင်တော့ ပါတီမှတ်ပုံတင် ဥပဒေအဖြစ် မကြာခင်မှာ ထွက်ပေါ်လာဖွယ်ရာလည်း ရှိနေပါတယ်။
ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ် မကြာခင် မြန်မာပြည်သွားမည်
မြန်မာနိုင်ငံ နေပြည်တော်မှာရောက်နေတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူး အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် မစ္စတာ ဗီဂျေး နမ်ဘီယားဟာ နိုဝင်ဘာ ၁ ရက် အင်္ဂါနေ့က အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့်၊ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြငြိမ်းတို့ အပါအ၀င် အမျိုးသားလွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။
အဲဒီလို တွေ့ဆုံစဉ် အတွင်းရေးမှူးချုပ် မြန်မာပြည်လာမယ်ဆိုတာကို မစ္စတာ နမ်ဘီယားက ပြောခဲ့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်း ဒီတွေ့ဆုံပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ SNDP ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ကိုယ်စားပြု လွယ်လင်/လင်းခေး မဲဆန္ဒနယ်မြေက အမျိုးသားလွှတ်တော်အမတ် ဦးစိုင်းကျော်ဇောသန်းက ပြောပြပါတယ်။
"သူ့အနေနဲ့က ကြားတာ မြင်တာတွေ ပြောင်းလဲမှုတွေကို လက်ခံပါတယ်ပေါ့။ ဒီထက်ပိုပြီးတော့ အရှိန်အဟုန်နဲ့ ပြောင်းလဲဖို့တော့ တိုက်တွန်းတာပေါ့နော်။ နောက် ဒီမိုကရေစီ ဒီထက်ကျအောင် တိုးပြီးတော့ လုပ်ပေးဖို့ တိုက်တွန်းတာပေါ့။ နောက် အကျဉ်းသား ၆၀၀၀ ကျော် လွတ်တဲ့ကိစ္စကိုလည်း ကြိုဆိုပါတယ်၊
အနောက်နိုင်ငံ ဥရောပတို့ အီးယူနိုင်ငံတို့မှာ ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်း အနည်းငယ် ရှိပါတယ်တဲ့။ အများစုကတော့ မြန်မာနိုင်ငံကို အပြစ် ပြောနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ အလျော့ပေးပြီးတော့ ဒီလို ပြောင်းလဲမှုနှုန်း တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ အဲဒီလို ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ အပြောကလည်း လျော့လာမှာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ သူက ထင်မြင်ချက် ပေးပါတယ်။"
"ဟုတ်ကဲ့၊ လာမယ်လို့ ပြောတယ်။ ဒါပေမယ့် အချိန်တော့ မပြောဘူးဗျ။"
"ဟုတ်ကဲ့၊ လာမယ်။ လာတဲ့အခါကျရင် ဒီထက် တိုးတက် ပြောင်းလဲတဲ့အခြေအနေ သူမြင်သွားရင် သူလည်း လက်ခံသွားနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ဟာကို သူ မျှော်လင့်ပါတယ်ပေါ့။"
ဦးခင်အောင်မြင့်ကရော ဘာတွေများ မေးပါသေးလဲခင်ဗျ၊ သူ့ဘက်က မေးတာ သိချင်တာတွေ ရှိပါသလား။ ဘာတွေများ ဆွေးနွေးပါသလဲ။
"ဦးခင်အောင်မြင့်ကတော့ Sanction လေးတွေ (ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှုတွေ) လျော့ပေးဖို့၊ ပြန်သွားရင် ပြန်ပြောပေးပါလို့ အဲဒီလို စကားပါးလိုက်တယ်။ နောက်ပြီးတော့မှာ ကျနော်တို့က ပါလီမန်စံနစ် ချီတက်တာက အင်မတန်မှ နုနယ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့် သိပ် မြန်မြန် ဆန်ဆန်ကြီးတော့ ပြောင်းလဲရင်
အခက်အခဲ တွေ့တာပေါ့။ အခုလိုပဲ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ တိုးတက် ပြောင်းလဲသွားဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ ပြောပါတယ်။"
"အမေရိကန် ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ကတော့ ၄ ရက်နေ့၊ စီအီးစီတွေနဲ့ပါ ချိန်းထားပါတယ်။ ၄ ရက်နေ့မှာ အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ၂ ယောက်လုံး တပြိုင်တည်း တွေ့မှာ။ မစ္စတာ နမ်ဘီယားနဲ့တော့ ဘယ်တော့တွေ့မလဲ မသိဘူး။ တွေ့မှာတော့ သေချာတယ်။"
(ပြည်တွင်း အယ်ဒီတာတဥိးက ပြည်ပရှိသတင်းသမားတွေဆီပေးပို့လိုက်တဲ့ ဝေဖန်ချက်တခု)
Comment From Burma 011111
By AUNG ZAW Wednesday, November 2, 201, Irrawaddy.
In early November 2010, Burma heldasham general election while Aung San Suu Kyi was still under house arrest, and even if she had been free the country’s Political Parties Registration Law would have prohibited her from running foraseat in the military- and ex-military-dominated Parliament.
In contrast, last week Burma’s Parliament passed amendments to the Political Parties Registration Law that would allow both Suu Kyi and her party, the National League for Democracy (NLD), to legally participate in the political process. Moreover, President Thein Sein appears to be seeking what may be the ultimate stamp of legitimacy for his new government by actively attempting to persuade Suu Kyi to register the NLD and run for office.
On Sunday, Suu Kyi held her fourth meeting in as many months with Labor Minister Aung Kyi—the government’s liaison to the opposition leader—during which they reportedly discussed both the Political Parties Registration Law amendments andawide range of the country’s most pressing issues, including the conditions surrounding an amnesty, peace talks with ethnic armed groups and economic and financial matters. Following the meeting, the pro-democracy leader was upbeat and said that in the coming days she will holdaseries of meetings with NLD leaders, ethnic leaders and other opposition allies. When asked if the NLD would register, however, Suu Kyi kept her cards close to her vest. "Once we see the law, then we will holdaparty meeting and decide whether or not we will register," she said.
Reading between the lines, Suu Kyi was saying that if the negotiations taking place over the details of the Political Parties Registration Law and the other major issues being discussed result in terms acceptable to her and the NLD, then the party will re-register and contest in future elections, including the upcoming by-election for seats vacated—mostly by MPs joining Thein Sein’s administration—since the November 2010 election.
To the dismay of critics and observers who justafew months earlier dismissed her relevance and ability to lead, Suu Kyi is now more influential and popular than ever, and both Thein Sein and major international players such as the US have clearly acknowledged her as the main opposition leader. This was confirmed in spades by her one-on-one meeting with Thein Sein in August, and reconfirmed by her latest meeting with his liaison, as well as the government’s not so subtle attempt to court her into the formal political process.
Suu Kyi is well aware of the factions and rivalries within the Burmese government and clearly sees Thein Sein as the horse to place her bet on. This was reflected in an article in the Wall Street Journal, where she said she believes the president is honest and straightforward.
This perception did not happen immediately after the new government was formed; it took time to emerge overaperiod of mutual confidence building. Suu Kyi was first allowedaminor personal excursion to Bagan, during which she took pains to not be too overtly political or do anything to unleashabacklash from government hard-liners.
On July 19, Thein Sein’s government allowed Suu Kyi even more leeway when it permitted her and some 2,000 people to march from NLD headquarters to the Martyr’s Day ceremony, where police officials did not intervene and actually helped facilitate the biggest public opposition gathering since the 2007 crackdown on pro-democracy protesters. Then on August 14, Suu Kyi was allowed to travel to Pegu and meet with supporters. In both instances, Suu Kyi kept things low-key and did not take advantage of the situation by stirring the crowd into any kind of anti-government frenzy, although she clearly could have done so if she had wanted to.
After Martyr’s Day, the meetings between Suu Kyi and government minister Aung Kyi resumed, and Suu Kyi sawaperceptible difference in her interactions with the new government versus the old military junta. Under the previous regime, Aung Kyi was merelyamessenger of the senior generals. But to Suu Kyi’s delight, this time he was given more authority to speak on behalf of the government and brought decent proposals on the key issues to be discussed, including the release of political prisoners.
Suu Kyi was even more pleasantly surprised when Thein Sein invited her to visit to Naypyidaw to meet with him and attendagovernment-sponsored economic forum.
A key player who deserves at least some credit for the meeting and the improved relations is respected economist U Myint, who despite having played guitar along with Suu Kyi’s son at NLD headquarters after Suu Kyi was released, was appointed to be the chief economic advisor to the president.
The irony is that no foreign envoy playedamajor role in breaking the ice between the two camps—it wasahomegrown initiative that came from the mutual desire of both sides wanting to sit down and talk.
Suu Kyi was probably, and rightfully, skeptical at first. After all, she had been invited several times in the past to meet with key regime leaders, including the former junta chief, Snr-Gen Than Shwe, and each time she had later ended up back under house arrest. But despite being known asavague politician beholden to Than Shwe, the more personal style of Thein Sein undoubtedly helped set Suu Kyi more at ease.
During her visit to Naypyidaw, Thein Sein’s wife, Khin Khin Win, even heldanon-pretentious family dinner for Suu Kyi that included good-natured and candid conversation, according to informed government sources. This was quiteacontrast from Suu Kyi’s previous experience with the wives of Burmese generals, many of whom were notoriously corrupt and haughty and held open animosity towards the pro-democracy leader.
In Burma, personal relationships playabig part in discussions between opposing parties, and Suu Kyi has been extremely positive since her cordial visit with Thein Sein in Naypyidaw. She seems convinced that changes are coming to Burma and it is time to takeachance—and that the best way she can contribute to the peace and prosperity of the nation is to participate in the process of political transition.
The Burmese government’s embrace of Suu Kyi—along with steps such as releasinganumber of political prisoners, relaxing restrictions on the press and suspending the Myitsone Dam project—has turned the recently isolated country that was known asapariah state intoadiplomatic hotspot.
Indonesia currently holds the chair of the Association of Southeast Asian Nations (Asean),achair which Burma would like to assume in 2014, and Indonesian Foreign Minister Marty Natalegawa just visited Burma onafact-finding mission. After the foreign minister’s three-day visit, he said that Naypyidaw's political reforms look “irreversible” and added that he believed the process would continue, but said more changes need to take place before Burma assumes the Asean chair.
The Burmese government is also keen to improve relations with the US in order to counterbalance China’s influence, and to get US sanctions lifted or significantly reduced. The US assistant secretary of state for democracy, human rights and labor, Michael Posner, and the US coordinator for policy on Burma, Derek Mitchell, will arrive in Naypyidaw today. It will be Mitchell’s third visit in two months, and he has previously said that if Burma takes concrete actions towards real reform, the US will reciprocate in kind.
European support, particularly from certain EU members, has been actively solicited by the new Burmese government as well. Norway’s deputy foreign minister concludedavisit to Burmaafew weeks ago and now the Norwegian international development minister is in town. In addition, Harn Yawnghwe, the director of the Brussels-based Euro-Burma Office, just concludedatrip to Burma that includedaflurry of meetings with government and opposition leaders.
The UN—whose special rapporteur on the situation of human rights in Burma has recommendedaCommission of Inquiry into crimes against humanity in Burma—also has its special envoy in country, with Vijay Nambiar currently in Rangoon for his second visit this year.
So with Asean, the US, Europe and the UN all represented in Burma at virtually the same time—a time when Suu Kyi is actively engaged in discussions with the government regarding her potentially joining the formal political process—what does the revolving door of diplomats denote?
Are they all in Burma just to keep tabs on the situation? Or are they there to both encourage the “reform” process and push the Burmese leaders to quickly make it more concrete and irreversible?
With Burma’s by-elections and an Asean meeting upcoming, and with the US about to turn the corner into an election year, it seems that now may be the time that the preliminary small-talk has stopped and the major players have sat down for serious negotiations over the top issues of concern to all sides.
If so, then this may be the best chance that Suu Kyi has to force Thein Sein and his new government allies to put their cards on the table and show how serious they are about meaningful and irreversible reform.
Given the internal rivalries and the possibility that the balance of power could tip back towards the hard-liners if Thein Sein and his reformist group falters, some political analysts have argued that Thein Sein should receive sufficient support from inside and outside of Burma to strengthen both his reform agenda and his internal power without expecting him to give too much in return at this point.
Others disagree, however, suspecting that the government is attempting to increase its legitimacy and obtain international concessions while making only small changes around the edge while maintaining firm control at the center.
Suu Kyi is aware of the arguments on both sides and of the pitfalls of taking one position or the other. But despite her improved relations with the government and their open attempts to woo her, she must maintain her role as the main opposition figure and maximize this opportunity for the benefit of all the people of Burma, including the country’s diverse ethnic groups.
Suu Kyi has received significant support from ethnic groups since her release from house arrest in November and, like her father, she will not betray her ethnic allies. Their issues, including the ongoing armed conflicts, have been one of her top agenda items when meeting with government officials, and she seems committed to following through on her offer to act asapeace broker between the government and ethnic groups.
Since Suu Kyi’s release from house arrest, there has been an ongoing debate about whether she should remain as head of the NLD or leave the party and becomeanational figure without allegiance to one particular organization, allowing her to lead the effort towards national reconciliation by being an independent player inaposition to bridge the gaps between all stakeholders. Suu Kyi is also aware of shortcomings in the NLD and the need for reform, so it won’t be surprising if in the future she delegates more authority and power toayounger generation of respected leaders, some of whom may currently be outside the NLD fold. There has even beenarumor that she has been offeredagovernment position, but has turned it down.
However, regardless of what Suu Kyi chooses to do about her NLD affiliation in the future, or whether she decides to run for office or stay outside the day-to-day political fray, what is now necessary is that the positive energy between the government and opposition camps be used to bring about real change that will haveasignificant impact on the lives of the people of Burma.
The many political dissidents still in prison, the ethnic soldiers fighting in the jungle, those suffering from human rights abuses such as rape and forced labor, refugees and displaced people along the border and all the people struggling just to survive in Burma deserveabetter future, and they have already placed their faith in Suu Kyi as their leader and the chief negotiator on their behalf.
What will be required isacombination of goodwill and pragmatism together with tough resolve and an unflinching negotiating strategy regarding key issues. In order to obtain the best results, both the Burmese people and the international community need to speak with one voice. Suu Kyi is that voice, and she should be given both our full support andablank check to cut the best deal possible under the current circumstances—which all signs indicate could, if the negotiations are handled properly, beagood one for the people of Burma.
Aung San Suu Kyi will be president - if the people want her
TV2met democracy activist in her home in Burma. (Norway)
Inahouse in the city of Yangon in Burma have democracy campaigner Aung San Suu Kyi spent under house arrest for most of the time in the last 22 years.- It isastruggle for democracy, but I have not thought of it asapersonal struggle, she said to TV 2.
Now she is free, and she told TV2that she believes that the generals who control Burma, are moving in the right direction. And mention in particular the dialogue between authorities and opposition.- I feel that the dialogue is good. I have faith in the president's favor. And I think he really wants to bring about positive change in Burma says Suu Kyi.
INSPIRATION: International Development Erik Solheim said it is inspiring to meet Aung San Suu Kyi. INSPIRATION: International Development Erik Solheim said it is inspiring to meet Aung San Suu Kyi. Photo: Knut Kollandsrud / TV 2Share on facebook6- Amazing inspirational
This week took Aung San Suu Kyi against International Development Erik Solheim. He is one of the few western ministers who have been admitted to the former as closed country.- To sit here where he has served for 20 years feels unreal. But her willingness to stretch my hand to the President that they will use it to bring Myanmar or Burma towards democracy, the great inspiring, says Mr Solheim to the TV 2From Aung San Suu Kyi went Erik Solheim to President Thein Sein with the message that democratic development in Burma must continue, and that political prisoners must be released.
- Changes in Myanmar is much faster than anyone in Europe has understood. It is striking to see how this government which mainly consists of former military - they are now so proud of what they perform here, he says.Suu Kyi to be president
The positive changes using the regime as bait for foreign investment.- He would like to have investments in oil and gas and hydropower from the Norwegian side.And the evolution continues, the Aung San Suu Kyi be presidentpalassets next occupant.- If people want me, and everything works correctly, then it's something I need to consider seriously, says Suu Kyi.